Yakaderera Kuparadzira Forex Broker - Yakanyanya Forex Kutengesa Inoparadzira Broker
musha / About / Nei FXCC / Anopararira
Kupararira ndeimwe yemamiriro akakosha ekutengesa nekudyara mu Forex. Iwe unofanirwa kuziva kuti Forex inopararira ndeyei kana iwe uchida kutengesa mumusika wekuchinjana kune dzimwe nyika.
Kupararira imutengo uyo vatengesi vanowana pakutenga kwese. Kana iko kupararira kuri kukwirira, kunozoguma nekuwedzera mutengo wekutengesa uyo unopedzisira waderedza purofiti. FXCC mutengesi anorongedzwa uyo anopa zvakashama kupararira kune vatengi vayo.
Chii chinopararira mu Forex?
Kupararira mutsauko pakati pemutengo wekutenga nemutengo wekutengesa weaseti.
Mune yakajairwa mari musika, madhiri anoitwa nguva dzese, asi zvinopararira hazvigare zviri munzvimbo dzese. Kuti unzwisise kuti sei izvi zvichiitika, zvakakodzera kuti unzwisise musiyano uripo pakati pemitengo yekutenga nekutengesa mari kana uchiongorora kutengeserana, izvo zvakare zvinotaridza kukwana kwemusika.
Mumusika wekutengesa uye Forex, kupararira ndiwo musiyano uripo pakati pekutenga nekutengesa mutengo. Kupararira mu Forex ndiwo mutsauko pakati pemutengo wekubvunza uye mutengo webhidha.
Chii chinonzi bhidhi, bvunza, uye hukama hwayo nekupararira?
Kune mhando mbiri dzemitengo pamusika:
Bhidha - iyo mari iyo mutengi wemari yemari anoronga kushandisa.
Bvunza - mutengo uyo mutengesi wemari yemari inoronga kutambira.
Uye kupararira ndiwo musiyano pakati peakambotaurwa 'bhidha uye kubvunza' izvo zvinoitika panguva yekutenga. Muenzaniso wakanaka weiri pachena musika hukama ndeye bazaar kubhidha kana mutengo wakaderera ukaiswa kumberi uye wechipiri mukwikwidzi anonamatira kune yakakwira chiyero chinodiwa.
Ndeipi iyo Forex inopararira kubva kudivi remutengesi?
Kubva pakuona kwema online broker, Forex inopararira ndiyo imwe yemari inowanikwa mari, nemakomisheni uye swaps.
Mushure mekunge tadzidza kuti chii chinonzi kupararira chiri muForex, ngatione kuti chinoverengerwa sei.
Iko kupararira kunoverengerwa mu Forex?
Musiyano uripo pakati pemutengo wekutenga nemutengo wekutengesa unoyerwa mumapoinzi kana pips.
Mune Forex, pombi ndiyo digit yechina mushure meiyo decimal poindi mukuchinjana mwero. Funga nezvemuenzaniso wedu weiyo euro mwero wekutsinhana 1.1234 / 1.1235. Musiyano uripo pakati pekupa uye kudiwa ndi0.0001.
Ndokunge, kupararira iri pombi imwe.
Mumusika wemasheya, kupararira ndiwo musiyano uripo pakati pekutenga nekutengesa mutengo wechengetedzo.
Hukuru hwekupararira hunosiyana nemutengesi wega wega uye nekusagadzikana uye mavhoriyamu anoenderana nechimwe chiridzwa.
Inotengeswa zvakanyanya mari peya ndiyo EUR / USD uye kazhinji, iyo yakadzika kupararira iri paEUR / USD.
Kupararira kunogona kugadziriswa kana kuyangarara uye kwakaenzana nevhoriyamu yakaiswa mumusika.
Wese online broker anoburitsa zvakajairika zvinopararira pane Chibvumirano Rondedzero peji. PaFXCC, izvo zvinopararira zvinogona kuonekwa pa 'avhareji inoshanda inopararirapeji. Ichi chishandiso chakasarudzika chinoratidza nhoroondo yekupararira. Vatengesi vanogona kuona iyo yakapararira spikes uye iyo nguva yespike mune imwechete kuona.
Semuenzaniso - maitiro ekuverenga kupararira
Iko kukura kwekupararira kwakabhadharwa mumaeuro kunoenderana nesaizi yechibvumirano chauri kutengesa uye kukosha kwepipi pachibvumirano.
Kana isu tiri kufunga maitiro ekuverenga kupararira muForex, semuenzaniso, kukosha kwepip pachibvumirano zvikamu gumi zvemari yechipiri. Mumadhora, kukosha i $ 10.
Pip kukosha uye hukuru hwechibvumirano zvinosiyana kubva kubroker kuenda kune broker - ita shuwa yekuenzanisa iwo iwo ma parameter kana uchienzanisa maviri akapararira nevatengesi vaviri vakasiyana vevatengesi
PaFXCC, unogona kushandisa demo account kuona chaiyo-nguva inopararira papuratifomu kana kuverenga inopararira uchishandisa yekutengesa karukureta.
Zvinhu zvinokanganisa saizi yekupararira pane Forex
Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa kutengesa kupararira?
Kubvisa kwechombo chikuru chemari
Kutengesa vhoriyamu pane chimbo chemari
Kupararira kweCFDs uye Forex kunoenderana neari wepasi pfuma. Iyo inowedzera kushingaira chinhu kutengeswa, iyo inowedzera mvura musika wayo, vatambi vari mumusika uyu, mikana isingaite inozoonekwa. Izvo zvinopararira zvakakwirira mumashoma mashoma emvura senge yekunze mari mapara.
Zvichienderana nezvakapihwa nemutengesi, iwe unogona kuona yakamisikidzwa kana kusiana inopararira. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kumisikidza kupararira hakuwanzo kuvimbiswa nevatengesi mukati menguva yemusika kusagadzikana kana macroeconomic zviziviso.
Kupararira kunosiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu emusika: panguva yechiziviso chakakosha macro, inopararira ichiwedzera, uye vatengesi vazhinji havape chivimbo chekupararira panguva yekuzivisa uye nenguva dzekusagadzikana.
Kana iwe uchifunga nezvekutengesa panguva yeEuropean Central Bank musangano kana kana iyo Fed ine chiziviso chakakosha, usatarisira kuti kupararira kuve kwakafanana senguva dzose.
Forex account isina kupararira
Uri kushamisika kana zvichikwanisika kutengesa Forex pasina kupararira?
Nhoroondo dzeECN maakaunzi anoitwa pasina kutora chikamu kwemutengesi. Iwe unongova nekupararira kudiki pane ino account, semuenzaniso, 0.1 - 0.2 pips mu EUR / USD.
Vamwe ma broker vanobhadharisa mari yakatarwa pachibvumirano chimwe nechimwe chakapedzwa asi FXCC chete mhosva dzinopararira uye hapana komisheni.
Yakanakisa Forex kupararira, chii icho?
Iyo yakanyanya kupararira mumusika we Forex ndeye interbank kupararira.
Iyo interbank forex inopararira ndeye kunze kwenyika musika wekuchinjana kupararira uye kupararira pakati peBID uye ASK mwero wekutsinhana. Kuti uwane interbank inopararira, unoda iyo Stp or Nhoroondo yeECN.
Nzira yekuziva sei kupararira muMT4?
Vhura iyo MetaTrader 4 yekutengesa chikuva, enda kuchikamu che "Market Watch".
Iwe unokwanisa kuwana nzira mbiri dzakabatanidzwa nekusarudzika mune MT4 yekutengesa chikuva:
Right tinya pamusika wekutarisa nzvimbo wobva wadzvanya pa "spread". Iyo chaiyo-nguva yekupararira ichatanga kuoneka padivi peyedhi uye wobvunza mutengo.
Pane MT4 chati yekutengesa, tinya-kurudyi uye sarudza "Zvivakwa," ipapo, muhwindo rinovhura, sarudza iyo "General" tab, tarisa bhokisi riri padyo ne "Ratidza ASK mutsetse," wobva wadzvanya "OK."
Chii chinonzi Forex chakapararira - zvinorehwa nekupararira mukutengesa?
Mumwe nemumwe mutengesi ane degree rake rekunzwisisa kune mutengo wekupararira.
Zvinoenderana nezano rekutengesa rakashandiswa.
Iyo diki iyo nguva yenguva uye yakakura nhamba yekutengeserana, iwe unonyanya kuchenjera iwe unofanirwa kana zvasvika pakupararira.
Kana iwe uri swing mutengesi uyo anoda kuunganidza huwandu hukuru hwepips pamusoro pevhiki kana kunyange mwedzi, saizi yekupararira haina zvishoma zvainoita pauri uchienzaniswa nesaizi yekufamba. Asi kana iwe uri wezuva mutengesi kana scalper, saizi yekupararira inogona kuenzana nemusiyano uripo pane yako purofiti uye kurasikirwa.
Kana iwe uchigara uchipinda uye kubuda mumusika, mutengo wekutengesa unogona kuwedzera. Kana iri iri zano rako rekutengesa, iwe unofanirwa kuisa maodha ako kana iko kupararira kuri kukwana.